Ogaden News Agency (ONA) – Taliyihii Ciidanka Asluubta Gonder oo Xabsiga Ladhigay Ogow Sababta.
Taliyihii Ciidanka Asluubta Gonder oo Xabsiga Ladhigay Ogow Sababta.
Posted by Dulmane	/ December 1, 2016
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Gonder ee Gobolka Axmaarada ayaa sheegaya in xabsiga ladhigay taliyihii ciidanka Asluubta ee Gobolka Gonder Inspector Lijalam Meseret.
Sida xogta aan kuhelayno taliyaha jeelasha ee Gobolka Gonder ayaa lagu eedeeyay in uu kadambeeyay baxsadka maxaabiis aad ubadan oo ka baxsatay jeelka dhexe ee magaalada Gonder.
Inspector Lijalam oo ahaa sargaal siwayn looga yaqaano Gobolka Axmaarada ayay kooxda TPLF ku eedaysaa in uu lajiro jabhadaha mucaaradka ah iyo dadka shacabka ah ee kacdoon wadayaasha ah waxayna kooxdu sargaalkan inbadan ugu tukubtay ulo booco.
Inspector Lijalam ayaa sidoo kale lasheegaa in uu xidhiidhaw lahaa Kornayl Zowdu oo ahaa ninkii ay dartii ubilowdeen kacdoonada dami waayay ee kasocda dhulka xabashida sidoo kale sargaalkan ayaa lagu xantaa in uu hub iyo dhaqaalaba siiyay kacdoon wadayaasha xabashida ah.
Sidoo kale kooxda TPLF ayaa sargaalkan ku eedaysay in uu sifiican ula dhaqmo Kornayl Zowdu iyo shacabka kale ee xabsiyada Gonder kujiraba taas oo ay sheegayaan in uu sargaalku kasoo horjeedo dadka shacabka ah ee lagu soo xidh xidhayo jeelasha uu xukumo.
Sida aan wararkaanagii hore idiinku sheegnayba waxaa xabsiyada magaalada Gonder ka baxsaday arday badan oo u maxaabiisnaa kooxda TPLF kuwaas oo dhamaan isu dhiibay jabhada Gimbot 7 Arbanyoj.
Sikastaba ha ahaatee xukuumada gumaysiga Itoobiya ee uu gabalkeedu siidhacayo ayaa xabsiyada utaxaabta ama khaarajisa hadba sargaalkii ay umaleeyaan in uu kasoo horjeedo xukunkooda iyo taladoodaba.